Apokalypsy Antohibe Ambohidratrimo - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
12 février 2012 admin ambohidratrimo, Antohibe
Mitohy hatrany ny fitsidihina pastoraly ataon’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol sy ireo delegasiona miaraka aminy. Ny fiangonana Apokalypsy Antohibe Ambohidratrimo indray no novangiany ny sabata 11 Febroary 2012 lasa teo.
Isaky ny mamangy ireo fiangonana Apokalypsy ny pasitera Mailhol, dia tsy adinony hatrany ny mizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ny fiangonana tsidihiny. Ny sabata 11 Febroary 2012 lasa teo, dia ny tao amin’ny Levitikosy 14 :1-7 ; Marka 1 :40-45 ary ny Hebreo 9 :13-22 no nampaherezany ireo mpino teny Antohibe Ambohidratrimo. Nisongadina tamin’izany toriteny izany ny amin’ny habokana, ka ny fomba nanasitranana izany no noentiny. Ohatra noraisiny tamin’io fotoana io ny tantaran’i Hamana, sy ireo boka folo lahy izay nositranin’I Jesosy ary ilay hita tao amin’ny Marka 1:40-45. Nohazavainy tamin’io fotoana io ihany koa fa miseho amin’ny fomba maro samihafa ny habokana amin’izao fotoana izao, toy ny aretina, ny olana, ny fahantrana sns. Nambarany tamin’izany fa ny fanomezana tsiny ny mpaminany dia mety hahatonga io habokana io ka tokony hitandrina ny tsirairay satria ny fijerin’i Jehovah tsy mitovy amin’ny fijerin’ny olombelona. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fametrahana ny komity mpiahy nasionalin’ny rantsana Tomima sy Orima tao antoerana. Nitarika izany fotoana izany ny teo amin’ny ekipa nasionaly notarihin’i zoky Hubert. Eo am-pamitana ny trano fiangonana moa ry zareo ao Antohibe Ambohidratrimo ka raha sitrapon’Andriamanitra dia amin’ity taona ity ho tokanana ny trano fivavahana.
Isan’ny nisongadina tamin’iny sabata 11 Febroary 2012 iny ihany koa ny famaranana ny fanoloran-tena fifadian-kananina 3 andro tao amin’ny fiangonana Apokalypsy Alasora. Ny anton’ity fifadian-kanina telo andro ity moa dia ny handresena ny asan’ny devoly izay mbola manjaka eny antoerana. Teo amin’ny mpino mihisa 300 latsaka kely teo no nandray anjara tamin’zany ka 15 taona no zandriny indrindra ary 86 taona kosa ny zokiny indrindra. Nanatrika izany fotoana izany, sy nitondra ny toriteny ny pasitera Herizo izay tompon’andraikitry ny fiangonana Apokalypsy Mahajanga.
← Fiangonana Apokalypsy Toamasina
Batisa teny Andranotapahina 24 febroary 2012 →